तपाईँहरूको सपना पुरा होस् – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsतपाईँहरूको सपना पुरा होस्
तपाईँहरूको सपना पुरा होस्
August 21, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
मेरो समस्या यस्तो छ, कि म नेपाली राम्रै बुझ्छु, तर बोल्न चाँही सक्दिन। कैलेकैले सम्झिन्छु कि म किन बोल्न सक्दिन? यो युनिक समस्या छ मसित।
यसो त विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्व इत्यादिहरूमा म प्रायः नेपालीहरूसितै हुन्छु। उनीहरूसित उहिल्यैदेखिको घुलमिल छ मेरो। सानैदेखि छ।
यो जुन उत्सव छ, यसलाई भाषसित जोड्नु त धेरै सुखद कुरा हो। यति ठूलो देशमा अनेकौं भाषा छन्। 22 वटाले सरकारी मान्यता पाइसकेको छ। अझ 38 वटा भाषा छ, मान्यता पर्खेर बसेको छ। पार्लियामेन्टमा यी भाषाहरूबारे निरन्तर बहस भइरहेकै छ।
भारतमा जतिपनि भाषाहरू छन्, सबैले बराबरीको दर्जा पाउनुपर्छ, दर्जा दिलाइनुपर्छ।
नेपाली भाषा धेरै प्राचिन र महत्त्वपूर्ण भाषा हो, जब पनि म हिमाचलतिर जान्छु, त्यहाँको पहाडी भाषा सुनेर म नेपाली भाषा सम्झिन्छु। मलाई त ती पहाडी भाषा र नेपाली एउटैएउटै लाग्छ। यी पहाडी भाषाहरूको आधारभुइँ एउटै छ।
म बुझ्छु, नेपाली भाषाको लागि सङ्घर्ष गर्नु, यो धेरै अफसोस्को कुरा हो। सिक्किम, दार्जीलिङतिर त भइगयो, आसामको ठूलो हिस्साले यो भाषा बोल्छ। त्यहाँ भाषा, संस्कृतिको उत्थान र संरक्षणको काम भइरहेकै छ। म जहाँ हुर्किएँ, त्यहाँ नेपाली संस्कृतिमा नै हुर्किएँ। हाम्रो संस्कृतिहरू उस्तो भिन्न छैनन्।
म लण्डन गएको थिएँ। त्यसबेला सांसद थिएँ। ब्रिटिश आर्मीमा रहेका गोर्खाहरूको ठूलो समूह भेटेँ। उनीहरूले समस्या राखे। भारतमात्र होइन, ब्रिटिश साम्राज्य बँचाउनमा जुन जातिको ठूलो योगदान छ, त्यो गोर्खा जाति नै हो। गोर्खाहरूको अधिकारको कुरालाई ब्रिटेनले अनदेखा गर्नु सही होइन। फकल्याण्ड, इन्डोनेशिया वा अर्जेन्टिना होस् ब्रिटेनसित लडाईँ हुँद जो प्रतिबद्धतासित लडे, उ गोर्खा नै थियो। गोर्खाहरूको प्रतिबद्धता, इमान्दारितासित कसैको तुलना हुन सक्दैन। यसैले मैले ब्रिटेन सरकारसित पनि भनें कि गोर्खाहरूको समस्यालाई अनदेखा गर्नु ब्रिटेनको लागि लज्जास्पद् कुरा हो।
यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन्, विशाल भारतमा हामी सुल्झ्याउँछौँ। यति ठूलो देशमा केही न केही घटना भइरहेकै हुन्छन्। एक-दुई घटनामा तपाईँहरू दुखी बन्नु, निराश बन्नु वा आक्रोशित बन्नु हुँदैन।
दार्जीलिङ नर्थइष्ट जोनमा पर्दैन तर मैले भनेको छु कि त्यहाँ कुनै समस्या हुन्छ भने त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। नर्थइष्टमाजुन भेदभावका सवालहरू छन्, हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्दै आइरहेकै छौँ।
नेपालीहरूलाई लाग्छ कि देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मौका नै पाएनौँ। शुरुदेखि नै कहीं न कहीँ गडबड भयो, यसकारण यस्तो परिस्थिति बनेन। देशमा राजनैतिकरूपले प्रतिनिधित्व गर्ने माहौल बनेन। तर सामाजिक, सांस्कृतिकरूपमा यस्तो छैन।
दार्जीलिङ, सिक्किमतिरजाँदा म भन्छु पनि कि उनीहरूको ‘इन्ट्रेस’-लाई ‘एड्रेस’ गरिएको छैन, यसलाई ठिक गर्ने काम हाम्रो हो।
मेरो नेपालीहरूसित सानैदेखिको उठ्नुबस्नु छ, यसकारण मलाई नेपालीहरूको समस्याबारे थाहा छ। म छिट्टो र गहिरोरूपमा समस्या बुझ्छु। कहीं पनि, जहिले पनि मलाई यस्तो लाग्यो, कि भारत सरकारले नेपालीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ, उनीहरूको मुद्दामा ध्यान दिनु आवश्यक छ, म मेरो व्यक्तिगत अनि मन्त्रीभएको नातामा दुवैतिरबाट सहयोग गर्नेछु।
आज तपाईहरूका ठूला नेता, दिग्गजहरू भेट्ने मौका पाएँ, खुसी लाग्यो। भारतमा नेपालीहरूको जुन योगदान छ, त्यसलाई शब्दमा बयान गर्न सकिन्न।
केवल भाषाको मात्र होइन, अन्यकला क्षेत्रसित सम्बन्धित उत्सव पनि गरिनुपर्छ। जस्तो नेपाली सङ्गीत, यो यस्तो सङ्गीत हो यो सुनेपछि मलाई त कुनै सङ्गीतले छुँदैन। कति म्याजिकल छ नेपाली सङ्गीत। म प्रायः नेपाली सङ्गीत सुन्छु।
संस्कृतिक, कला अथवा क्लासिकल, सेमी क्लासिकल आर्ट फर्मका अन्य विषयहरूमा पनि यस्तो उत्सव होस्।
तपाईँहरूको सपना पुरा होस्, म भगवानसित प्रार्थना गर्नेछु।
(भारतीय गोर्खा परिसङ्घद्वारा नयाँ दिल्लीको तीनमुर्ति भवनमा आयोजित भाषा मान्यता दिवसको रजत उत्सव कार्यक्रमका मुख्य अतिथि केन्द्रिय गृह राज्य मन्त्री किरण रिजिजुले दिनुभएको सम्भाषणको सम्पादित अंश-सम्पादक)
दार्जीलिङलाई काश्मीर बनाउने षड़यन्त्र हुँदैछ, रोडम्यापबिना साँझा मञ्चको भविष्य अन्धकारः डा. हर्कबहादुर छेत्री
भागोपले मनायो दिल्लीमा भाषा मान्यता रजत दिवस